Maqaal BOI: 2018 waa sanadka ugu badan Bollywood-ka sameeyeen 6-Blockbuster mudo 35-sano kadib! – Filimside.net
Maqaal BOI: 2018 waa sanadka ugu badan Bollywood-ka sameeyeen 6-Blockbuster mudo 35-sano kadib!
January 9, 2019 Zakarie Abdi
Inaba caadi ma ahan sanadkii tagay 2018 Bollywood-ka waxay sameeyeen 6-filim oo Blockbuster noqdeen dhawaanahana taariikh ahaan lama arkin sanad tiro intaas la eg Blockbuster noqdaan waxaana dib loogu laabanayaa bilawgii 80-maadkii.
80-maadkii gaar ahaan 1981 iyo 1983 ayay horey u dhacday in 6-filim hal sano gudahiisa Blockbuster noqdaan, sidoo kalena 2018 waa sanad kobac xoogan sameeyay dhaqaalaha filimada laga helo. Balse culeeska wuxuu ka jiraa filimada qaar ee Blockbuster noqdeen in dad badan tikit u goosanin nidaamka canshuurta oo aad u sareeyo awgeed waxay yareesay tiridda dadka tiyaatarada soo aadi karo.
Fadlan hoos kaga bogo sedexda sano ee taariikh ahaan Bollywood-ka sameeyeen min 6-filim oo Blockbuster ah sida shabakada Boxoffice India (BOI) ay soo daabacday:
Farqiga u dhaxeeyo 2018 oo ay Bollywood sameeyeen 6-Blockbuster iyo labadii sano hore ayaa ah in 1983 iyo 1981 6-filim Blockbuster noqdeen labada ugu sareyso ee lacagaha ugu badan soo xareeyeen tiridda tikit u goosteen inay ka badan yihiin wadarta guud tirada tikit u goosteen 6-filim 2018 Blockbuster noqdeen!
Tusaale ahaan 1983 labada ugu sareyso ee Blockbuster noqdeen Coolie iyo Betaab wadar ahaan tirirada tikit u goosatay waxay ka badan yihiin 6-filim 2018 Blockbuster noqotay wadar ahaan tirida u goosatay!
Waxaa Aqrisay 562